Home News Gudoomiyaha Gobolka Waqooyi Bari Ee Dalka Kenya Oo Sheegay Ganacsiyada Sharci Darada...
Gudoomiyaha Gobolka Waqooyi Bari Ee Dalka Kenya Oo Sheegay Ganacsiyada Sharci Darada Ee Ka Jira Gudaha Kenya In Lagu Maalgeliyo Ururka Al Shabaab
Guddoomiyaha gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya Maxamed Birik, ayaa sheegay shalay oo Jimco aheyd in waxyaabaha sida sharci darada loogu iib geeyo dalka Kenya lagu maal geliyo Al Shabaab.
Guddoomiyaha ayaa digniin u jeediyay ganacsatada iyo dadka wax dhoofiya inay ka digtoonaadan inay sharci daro ganacsi ku geliyaan dalka Kenya, haddii la qabtana sharciga la waafajin doono.
Guddoomiyaha oo saxaafadda kula hadlayay xerada dhadhaab ayaa sheegay inay halkaasi ku qabteen waxyaabo sharci daro ah oo laga qaaday dalka Soomaaliya, kuwaasi oo la doonayay in si sharci daro ah lagu geliyo dalka Kenya.
Sokor, saliida cunada lagu kariyo iyo bariis, ayuu sheegay inay ku qabteen xuduuda ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo uu sheegay inay sharci daro aheyd.
Ku dhawaad 15 loor oo ay ku jiraan waxyaabo la doonayay in si sharci daro ah lagu geliyo dalka kenya ayuu sheegay in ciidamada amaanka gacanta ku dhigeen, taasi oo uu ku tilmaamay inaysan waafaqsaneyn sharciga ganacsiga kenya.
Dhaqaalaha ka yimaada ganacsiga sharci darada ayuu sheegay in lagu maalgeliyo Al Shabaab, sida uu hadalka u dhigay.
Previous articleMaleeshiyo Ku Dagaalamay Deegaano Hoostaga Gobolka Sh/hoose
Next articleDeg deg: Warmurtiyeedka shirka dowlad goboledyadda oo dhawan la aqrin dooni
R/wasaare Kheeyre oo Laba Arin Garoowe u tagaya iyo C/wali gaas...